Akhriso Nuxurka Khilaafkii Madaxda Xisbiga UCID oo si rasmi ah loo soo afjaray . |
Akhriso Nuxurka Khilaafkii Madaxda Xisbiga UCID oo si rasmi ah loo soo afjaray .
Hargaysa (GNN) Khilaafkii u dhexeeyay Musharraxa Madaxwaynaha ee Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Jamaal Cali Xuseen iyo Guddoomiyaha Xisbigaas Faysal Cali Waraabe, ayaa Guddi Odayaal ah oo Maalmihii u dambeeyay ka shaqeynayey soo afjarayaan sida qorsuhu yahay.
Geesta kale, Guddoomiyaha Siyaasiyiinta Madasha Wada Tashiga Somaliland Xasan Guurre Jaamac, oo ka mid ah Guddiga Odayaasha ah ee arrrintan ku jira, ayaa rejo ka muujiyey in khilaafka UCID la soo afjaro, “UCID waxa laga yaabaa inuu arrinkiisu (Khilaafkiisu) dhawaada, aniga oo rejaynayo inuu dhamaado.” Ayuu yidhi Mujaahid Xasan Guurre oo la hadlay Telefiishanka Royal. Sidoo kalena Ilo-wareedyo xog-ogaal ah, ayaa Xalay Hargeisatimes u xaqiijiyey in Guddiga Odayaasha ahi Isniinta soo socota ku dhawaaqayaan heshiiska labada dhinac wada gaadhayaan ee lagu soo afjarayo khilaafka ka taagan Musharraxnimada Xisbiga ee doorashada soo socota.
Hasa-yeeshee ilo-wareedyo kale oo aanu wax ka waydiinay nuxurka waxa labada dhinac ku heshiiyeen, ayaa ka gaabsaday inay bixiyaan faahfaahiyaan ka badan in la soo afjarayo, iyaga oo ku cudur-daartay qodobada rasmiga ah ee laga soo saaray in aan la shaacin inta ka horreysaa waqtiga gudada dhinacyaddu ku dhawaaqayaan.